आईजीका दाबेदार सशस्त्र डिआईजी श्रेष्ठमाथि सरकार किन अनुदार भयो? - Mahendranagar Post
डोटीको जोरायलमा सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना
गड्डाचौकी नाकाबाट भारत जाने महिलामाथिको निगरानीमा कडाइ
टीकापुरमा दोहोरो सुविधा रोक्न नवीकरण शिविर सञ्चालन
कञ्चनपुरमा पहिलोपटक देखियो लम्पी स्किन रोग
कैलालीमा मोटरसाईकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा एक पुरुषको मृत्यु
गृहमन्त्रीले खाणले भने, छानविन समितिको प्रतिवेदन पर्खिनुपर्छ
सत्तारुढ कार्यदलको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियाे, अपराह्न ४ बजे पुनः बस्ने
ओली सरकारका जनविरोधी कार्यहरुलाई खारेज गर्न वर्तमान सरकारसँग झाँक्रीको माग
सांसद तथा पूर्वमन्त्री ठगुन्नाको मागः दार्चुला घटनामा भारतसँग औपचारिक विरोध जनाइयोस्
मंगलबार सुनको मूल्य स्थिर
घट्यो सुनको मूल्य, आज कति छ ?
दार्चुला मालपोत कार्यालयद्धारा १ करोड बढी राजस्व संकलन
हराएका २३ वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई ट्राफिक प्रहरीले जिम्मा लगायो
अमेरिकी राजदूत बेरी र प्रधानसेनापति थापाबीच भेटवार्ता
स्रोत नखुलेको साढे १८ लाख रुपैयाँसहित एक भरतीय सहित दुईजना पक्राउ
उपराष्ट्रपतिसँग प्रधानसेनापतिको बिदाई भेट
पेस्तोलसहित २ भारतीय नागरिक पक्राउ
प्रतिनिधि सभा बैठक २०७८ साउन १९ गते (प्रत्यक्ष प्रसारण)
साहसिक पर्यटक पर्खंदै विश्वकै दोस्रो अग्लो भनिएको बन्जी पुल
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै, यस्ता छन् सम्भावित कार्यसूची
कोरियाका विदेशी बेहुलीः जो बन्धन तोड्न सफल हुँदैछन्
टोकियो ओलम्पिकः १० औं दिन सकिँदा पदक तालिकामा चीनको अग्रता कायमै
पारस खड्काद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा
राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले मागे माफी
टोकियो ओलम्पिकः चीन २३ स्वर्णसहित शीर्ष स्थानमै
सेती प्रयोगशालामा मंगलबार २८ जनामा कोरोना पुष्टि
प्रधानमन्त्री देउवाको एक शव्दले रोकियो जागेश्वर गौतमको सरुवा
Home आन्तरिक मामिला आईजीका दाबेदार सशस्त्र डिआईजी श्रेष्ठमाथि सरकार किन अनुदार भयो?
आईजीका दाबेदार सशस्त्र डिआईजी श्रेष्ठमाथि सरकार किन अनुदार भयो?
नियमावलीमा रहेको पदावधी थप्ने नियममा श्रेष्ठलाई ‘बाइकट गर्नुको कारण
सुजन पन्त, काठमाडौं– सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीमा एक जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गर्यो। तर, ‘चेन अफ कमाण्ड’मै चल्ने अर्को संगठन सशस्त्र प्रहरी बलका एक जना नायब महानिरीक्षक (डिआईजी)को चार वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा पदावधि थप गरेन।
आफू अनुकुलको मान्छेलाई एआईजी बनाउनको लागि नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी थप गर्न सक्ने सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका एक जना डिआईजीको पदावधी थप्न सकेन। सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गरिरहँदा सशस्त्रका ती डिआईजीलाई किन अन्याय गर्यो?
पदावधी थप नहुने भएपछि हाल सुदूरपश्चिममा सशस्त्र प्रहरी प्रमुख रहेका प्रवीण श्रेष्ठ डिआईजीबाटै घर जाने निश्चित भएको छ। उनी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)सम्म बन्न सक्ने अधिकारी हुन्। सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले श्रेष्ठको पदावधी थप नगरेपछि श्रेष्ठ आज राति १२ बजेपछि अवकाशमा जानेछन्।
जबकी सशस्त्र प्रहरीमा नयाँ नियमावलीमा डिआईजी र एआईजीको हकमा पदावधि चार बर्ष पुगेपछि एक बर्ष थप गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। सशस्त्रमा एआईजी र डिआईजीको पदावधी ४ वर्ष हुने प्रावधान छ। पदावधी ४ वर्ष पूरा भएपछि सशस्त्र प्रहरीको नियमावली नियम ६५ को २ अनुसार १ वर्ष थप्न गर्न सक्ने व्यवस्था नियममा छ।
यही व्यवस्थामा टेकेर सरकारले सशस्त्रका डीआईजीद्वय मन्दिप श्रेष्ठ र खड्क राईको पदावधि थप गरेको थियो, २४ माघ २०७७ मा। उनीहरुको चार वर्षे कार्यकाल सकिन लागेपछि सरकारले एक वर्ष पदावधी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनीहरु दुवै जनाको ५ वर्षे पदावधी आगामी माघ २६ मा सकिँदैछ। तर यहि नियम श्रेष्ठका हकमा भने किन लागू गरेन सरकारले? एक अधिकारी भन्छन्,‘प्रहरी भित्रको राजनीति र नेताको खल्तीबाट प्रमुख बनाउने प्रचलनलाई स्थायीत्व दिन यसो गरिएको होला। यो त ठूलो बेइमानी हो।’
त्यसपछि १२ वैशाख २०७८ मा दुई जना एआईजीको पदावधी थप भयो। एआईजीद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको पदावधी यहि मन्त्रिपरिषदले सोही नियमावलीमा टेकेर गरेको थियो। एआईजी केसीको अवधि नथप्न सशस्त्रका प्रमुख आईजीपी शैलेन्द्र खनालको लविङ रहेको बताइएको थियो।
सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि चार वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा यसरी एक बर्ष म्याद थप भइरहेको अवस्थामा डिआईजी श्रेष्ठको मात्र पदावधी थप नहुनु राजनीतिक कारण भनिएको छ।
पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ। आफू अनुकूलको मान्छेलाई हेरेर बढुवादेखि सरुवामा राजनीति हुने गर्छ। ‘त्यसकै परिणाम हो– डिआईजी श्रेष्ठको पदावधी नथपिनु’ सशस्त्रका एकजना पूर्वडिआईजी भन्छन्।
सशस्त्र मुख्यालयले पदावधी थप प्रस्तावको सिफारिस गृह मन्त्रालयमा लगे पनि गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको कारण रोकिएको गृह स्रोत बताउँछ। अहिलेको समस्याको प्रमुख कारण राजनीतिक नेतृत्व नै भएको सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
यता, सशस्त्र आईजीपी खनाल यतिबेला डिआईजी श्रेष्ठको पदावधी थप गर्ने पक्षमा भएकै कारण उनले पदावधी थपको प्रस्ताव एक महिनाअघि नै गृहमन्त्रालय पठाइसकेका थिए। तर, मन्त्रालय डिआईजी श्रेष्ठको पदावधी थप गर्न सकरात्मक थिएन।
डिआईजी श्रेष्ठ यसअघि मन्त्रालयको स्वीकृती विपरित भारतीय दूतावास छिरेको भन्दै विवादमा तानिएका थिए। उनलाई त्यो बेला सचेत समेत गराइएको थियो। उनी कूटनीतिक आचारसंहिता विपरित गोप्य रुपमा भारतीय दूतावास छिरेको भन्दै विवादमा आएका थिए। श्रेष्ठ ६ मंसिर ०७६ मा बा२झ २३९० नम्बरको सरकारी गाडी लिएर लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास पुगेपछि छानविनमा परेका थिए।
त्यसपछि श्रेष्ठको पदावधी थप नगर्न सशस्त्रकै उच्च अधिकारीहरु शक्तिकेन्द्र धाइरहेका थिए। उनको पदावधी थप नभएपछि हाल सशस्त्र प्रहरीको प्रवक्ता समेत रहेका डिआईजी राजु अर्याल र नारायणदत्त पौडेल आगामी महानिरीक्षक (आईजी)को प्रतिस्पर्धामा छन्।
हालका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख खनाल आगामी २८ चैतमा अनिवार्य अवकासमा जाँदैछन्। त्यसपछि करिव १ महिनाका लागि हालका एआईजी पुष्पराम केसी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक बन्नेछन्। २९ चैत २०७८ देखि २१ वैशाख २०७९ सम्म केसीले सशस्त्र मुख्यालयमा आफ्नो फोटो झुड्याउँछन्।
यदि केसीको एक वर्ष पदावधी थप नभएको भए गत २० वैशाख २०७८ मा अवकाशमा जान्थे। त्यसपछि खड्ग राई, मन्दिप श्रैष्ठ, प्रविण श्रेष्ठ, राजु अर्याल, नारायण पौडेलमध्ये दुई जना एआईजी हुन्थे। त्यसपछि उनीहरु मध्येबाट एकजना आईजीपी हुन्थे।
Previous articleडोटीमा अपरेटरका सनकका भरमा खनिएका सडकले बढायो पहिराको जोखिम
Next articleटिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
समाचार महेन्द्रनगरपोष्ट - साउन १९, २०७८ 0
डोटी- डोटीको जोरायल गाउँपालिका–१ पोखरीडाँडामा डोटेली कला, संस्कृति र पहिचान झल्कने संग्रहालयको स्थापना गरिएको छ। रानीवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले जिल्लाको परम्परा,...
स्वास्थ्य महेन्द्रनगरपोष्ट - साउन १९, २०७८ 0
कैलाली -सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको कोरोना परिक्षणमा थप मंगलबार २८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १९१ नमूनाको कोरोना...
आन्तरिक मामिला महेन्द्रनगरपोष्ट - साउन १९, २०७८ 0
काठमाडौं-महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट चोरी भएका २३ वटा मोटरसाइकल फेला पारी धनीलाई जिम्मा लगाएको छ। मंगलबार विभिन्न मितिमा...